नेपाल आज | 'हामी सुनको थालमा भीख मागिरहेका त छैनौँ !, यस्तो हुनुपर्छ स्मार्ट समाजवाद' (भिडियो)
राजनीति अर्थ भिडियो कुरा: युवाको
'हामी सुनको थालमा भीख मागिरहेका त छैनौँ !, यस्तो हुनुपर्छ स्मार्ट समाजवाद' (भिडियो)
'विश्वको अर्थतन्त्र स्मार्ट भइसक्यो, नेपाली नेताहरु पुरानै चिन्तनमा'
सोमबार, ०५ चैत २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज(PO)
काठमाडौं । नेपाललाई संघीय ढाँचामा लैजान विभिन्न चरणमा गरेर तीन तहका निर्वाचन सकिएको छ । अहिले जन प्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन प्रयासरत छन् । यही परिप्रेक्षमा नेपालआजका लागि नेत्र पौडेलले राजनीतिक विश्लेषक तथा युवा राजनीतिज्ञ हरिराम रिमालसँग विशेष बहस गरेका छन् ।
केपी नेतृत्वको यो सरकारलाई रिमालले निरंकुशतापछि पहिलोपटक सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल सरकारले सुनको थालमा भीख मागेको कटाक्ष गर्दै उनले वाम गठबन्धनको सरकारले चाह्यो भने देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सम्भव रहेको बताए ।
अर्थतन्त्रको प्राविधिक पक्षका जानकार डा. युवराज खतिवडालाई केपी शर्मा आलीले अर्थमन्त्री नियुक्त गरेर नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्ने लक्षण देखाएको उनको भनाइ छ ।
नेपालका राजनीतिक नेतामा प्रविधिका विषयमा बुझ्नसक्ने कार्य क्षमता कमजोर रहेको उनको भनाई छ । राजनीतिक प्रतिनिधलाई प्राविधिक विषयमा जानकार बनाउन उत्तरी छिमेकी राष्ट्र चीनमा प्रतिनिधिलाई राज्यका सबै प्रक्रियामा जिम्मेवारी दिने प्रणाली रहेको उनले बताएका छन् ।
‘चीनमा १०–१५ वर्षपछि को राष्ट्रपति बन्दै छ भन्ने कुराले उसलाई राज्यका सबै प्रक्रियामा जिम्मेवारी दिएर प्रतिनिधिलाई क्षमतावान बनाउने गरिन्छ,’ रिमालले भने, ‘तर, नेपालको राजनीतिक प्रणाली त्यस्तो छैन ।’
ईन्टरनेटको युगसँगै विश्वभर विकासको लहर सुरु भएको भन्र्दै अर्थतन्त्रमा पनि चुस्तता भित्रिएको रिमालको तर्क छ । तर नेपालको राज्यसत्ता सम्हाल्ने नेताहरुले यो विकासको गति महसुश गर्न नसकेको उनको ठहर छ ।
तर सोही विकासको गति बुझेर स्मार्ट अर्थतन्त्रलाई नेपालमा भित्र्याउन सक्ने योग्य व्यक्तित्वको आवश्यकता रहेको रिमालले बताए । साथै उनले नेपालको बितरणमुखी अर्थतन्त्रले समृद्धिमा पुग्न नसकिने उनको बुझाइ छ ।
अर्थतन्त्र सुधार्ने उपाय
अर्थतन्त्र कमजोर रहेको यो अवस्थामा संघीयता कार्यन्वन गर्न कसरी सकिएला ? भन्ने जिज्ञाशामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन आधुनिक प्रविधिको भरपुर प्रयोग गर्न सुझाउँछन् उनी ।
पुरानै कार्यशैलीले गर्दा व्यवसायीले विभिन्न ठाउँबाट सरकारको राजस्वमाथि चलखेल गर्नुका साथै नागरिकलाई पनि मर्कामा पर्ने गरेको उनको तर्क छ ।
एकै ठाउँमा बसेर सम्पूर्ण कार्यसम्पदन गर्न सकिने प्रविधिको विकास भइसकेको अवस्थामा नेपालले पुरानै ढर्रामा कार्य सम्पादन गर्नु पनि समृद्धिको बाधक भएको उनले बताए ।
कुरा: युवाको राजनीति हरिराम रिमाल